Shiinaha Customized Catnip-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Catnip
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:
Dadka xayawaanka jecel, markaad iibsaneysid kalluunka, weligaa miyaad ka fikirtay inaad nala soo xiriirto si aad u beddesho buulkaaga xayawaankaaga, dharka xayawaankaaga, ama xadhigga iyo waxyaabaha kale ee carruurtu ku ciyaaraan?
2. Halbeegyada Wax soo saarka Catnip (Qeexitaanno)
Cabirka waa la beddeli karaa codsi
Isboortiga dibedda, firaaqada iyo dalxiiska
Sheyga miisaanka guud
4. Baakadaha iyo keenista jaakada taatikada eeyaha
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 2 * 35 * 15CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 37CM ​​X 50CM X 40CM. 50PCS / sanduuqa. Waxyaabaha dhagxaanta ah: K = K 5 lakab oo ah warqad jiingado qaro weyn leh
(4) FCL miisaanka guud: 52KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 50KG.
(9) Waxaan qaabeyn karnaa habka xamuulka ee keydinta xamuulka, laakiin tani waxay hureysaa waxyaabo qaar, waxay sababi kartaa muuqaalka isbedelka sheyga, guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(1) Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu keydinno kharashyada adiga kugu baxa.
(3) Iibinta shaybaarka kadib. Haddii nooca ugu horreeya u baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka, iyo dhammaan hannaanka soo saarista nooca labaad ee shaybaarka waa gebi ahaanba lacag la'aan.
(4) Sanduuqa boostadayada shirkadu si joogto ah ayey waxtar u leedahay, shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee adeega macaamiishana, waad qori kartaa si aad ula tashato oo aad uga dacwooto wakhti kasta.Waan aqrin doonnaa oo aan uga jawaabi doonaa si hufan oo taxaddar leh.
(5) Waxaan si adag u xakameyn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuugu soo gudbin doonaa adiga oo leh qiime 100% u qalma.
Q6. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga Ma siisaa shaybaar? Ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
Q10aad. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga Ma siisaa shaybaar? Ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
J: ï¼ˆ1ï¼ ‰ Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka qeybta saddexaad.
(3) Waxaan nahay soo saaraha alaabada Disney baseball boorsooyinka, Wal-Mart bag iyo Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarkeena.
J: Midabka dhabta ah ee badeecada ayaa waxyar ka duwanaan kara midabka ka muuqda sawirka sababo la xiriira soo bandhigid kala duwan iyo saameynta iftiinka.Sababtoo ah cabirka gacanta, fadlan u ogolow 1-2cm weecasho weecasho aad ayaad u mahadsantahay!
Calaamadaha kulul: Catnip, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka